आर्ष नेपालको लोगो सगरमाथाको चुचुरोमा फर्फरिने | Best News Portal
काठमाडौं । प्रथम साहित्यिक सगरमाथा आरोण अभियन्ता साहित्यकार लक्ष्मण सापकोटाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोण गर्नुहुने भएको छ ।
काठमाडौंको एक होटलमा आर्ष नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले साहित्यको क्षेत्रबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वको पहिलो व्यक्ति नेपालको हुने बताउनु भयो । उहाँले आरोहणको क्रममा ५ वटा कीर्तिमा वल्र्ड रेकर्ड राख्नु हुनेछ । शैव सभ्यताको रुपमा चिनिने ॐ, शिव, बुद्ध (लुम्बिनी), पशुपतिको तस्बिर सगरमाथा पुर्याउनु हुनेछ । सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आफैले रचेका दुई कविता बाचन गर्नुहुने, आफ्ना दुई कीर्ति इन्जात्से हिमखिर चुम्दा (यात्रा संस्लेषण) र झड्केली (सामाजिक उपन्यास) विमोचन गर्नु हुनेछ । उहाँले मेची र महाकालीको माटो र पानी सगरमाथाको टुप्पोमा पुर्याउनुका साथै नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान केचन केबलको माटो पनि सगरमाथामा लग्नु हुनेछ । सताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र माधव घिमिरेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको बाल्मीकीद्वारा लिखित रामायण पनि साथ लिएर जानुहुनेछ ।
कार्यक्रममा आर्ष नेपालका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक रविन्द्र रिजालले नेपाली साहित्य र नेपाली मौलिकतालाई सगरमाथाको शिखरमा पुर्याएर विश्वलाई नेपाल साँच्चिकै के हो ? साहित्यकारहरु के हुन् ? भन्ने महत्वपूर्ण भाव दर्साउँदै वल्र्ड रेकर्डमा लेखाउने उहाँको प्रयास स्रहानीय रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले आर्ष नेपालको लोगो अंकित व्यानर सापकोटालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । साहित्यकार सापकोटाले आर्ष नेपालको व्यानर सगरमाथाको चुच्चोमा लगि फरफराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै साहित्यकार सापकोटाले साथमा विभिन्न साहित्यकाहरुको तस्बिर पनि लानु हुनेछ ।
यसअघि उहाँले इन्जात्से र मेरापिक हिमालको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ । साथै मेची देखि महाकाली गड्डाचौकीसम्म (१०२६ किलोमिटर) र बनेपा बर्दिबास साहित्यीक दौड पनि पुरा गर्नुभएको छ । प्रत्येक वर्ष भानु जयन्तीको दिन भानुको पोशाकमा रामायणको किताब लिई भानु दौडा पनि गर्दै आउनु भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ...